Ravalomanana sy Rajoelina : Misolelaka amin’ny Frantsay -
AccueilRaharaham-pirenenaRavalomanana sy Rajoelina : Misolelaka amin’ny Frantsay
Taorian’ny nahalanian’ny filoha frantsay vaovao omaly Emanuel Macron dia efa nipi- maso any sahady Ravalomanana Marc nandefa taratasy fiarahabana noho izao fandresena izao. Amin’ny maha filohana antoko azy moa no nandefasany io taratasy io, ary ny nanaitra tamin’ity hafatra ity alohan’ny sonia dia ny filazana fa kandida amin’ny taona 2018 ny tenany. Ny nahazendana dia mbola tsy nivaly akory ny vokatra vonjimaika dia efa nisekoseko indray Ravalomanana sy ny ekipany. Midika izany fa miandry fanohanana feno amin’ny frantsay indray Ravalomanana satria efa manakaiky ny datim-pifidianana. Mazava izany izao fa tsy hanana ny fiandrianany sy ny fahaleovan-tenany mihitsy i Madagasikara ary tiana hampidirina kizo indray ny firenena. Hiaraha- mahalala mantsy ny tsindry ataon’ny frantsay amin’ireo tany izay zanahany, sy ny fifandraisana frantsa-afrika, izay tsy fahombiazana hatrany no hita ary eo ny ady an-trano isan-karazanyi zay tsy tonga any amin’ny fahombiazana mihitsy. Hiaraha -mahita ihany koa ny fitondran’ny firenena afrikanina faisana noho ny ataon’ny frantsay. Efa taratry ny fiandrasana ny baiko iraisam-pirenena indray izany izao i Madagasikara raha Ravalomanana no ho lany ho filoham-pirenena amin’ny taona 2018 raha izao fihetsika misolelaka sahady amin’ny vahiny izao no ataony.
Mody mangina anefa efa nahavita fifanarahana, raha ny atsy amin’ny ekipan’i Andry Rajoelina no jerena. Ity farany mantsy izay efa fantatry ny rehetra fa efa hatramin’ny taona 2009 no notohanan’ny frantsay, ary nahatonga azy nitantana ny fitondrana tetezamita. Baikon’ny frantsay ihany koa io fanginan’ i Andry Rajoelina ankehitriny io, mba tsy hitsara azy noho ny zava-bitany teo aloha ny hevi- bahoaka. Manamafy io fanerena ny fanginany io ny fitsidihan’ ny masoivoho frantsay Véronique Voulond an’i Andry ny voalohan’ny volana novambra 2016 roa andro taorian’ny nahatongavany teto Madagasikara. Nanahy mafy mantsy ny masoivoho frantsay tamin’ io fotoana io fa haneho hevitra no nahatongavany teto Madagasikara satria dia nafana ny raharaha teto amin’ny firenena tamin’ io fotoana io . Manamafy ireo voalaza ireo rahateo ny fanazavanai zay noentin’i Andry Rajoelina taorian’ny fihaonana ‘’ny fahatongavako eto dia tsy hiditra anaty olana velively raha ny sitrapoko aza dia niditra mangina aho’’. Eo ambany vahoan’ny frantsay ihany koa izany ny mpitarika ny antoko volomboasary, ka ho sahirana i Madagasikara satria tsy maintsy handray baiko avy any ivelany foana
Tsy maintsy ary voatery ve ny mpitondra iray hiakin-doha amin’ny firenena vahiny izay efa nampidi- doza an ‘i Madagasikara. Samy niaraha- nahita ny toerana misy ny firenena amin’izao fotoana izao, vokatry ny fanekena ireo firenena vahiny ireo. Ravalomanana Marc sady efa tohanan’ny amerikanina no mbola tiany ho savilihana ihany ny mpanohana an’I Andry Rajoelina dia ny frantsay izany. Ireo vahiny ireo anefa izay efa fantatry ny roa tonta ny paika tian’izy ireo hatao dia ny fitadiavana olona hapetraka eo amin’ny fitondrana, hanaraka baiko hampiady ny Malagasy hangalana nyharem-pirenena.